Tattoos zaseHawaii - I-Tattoos yamaHawaii e-Cool yaseThawaiy yaseFawaiian
I-tattoos yamaHawaii yama-Tribal yabesifazane
Tattoos Imibono yobuciko Ithimba Kwangathi 14, 2017
I-1. I-Stingray ye-Hawaiian Tribal Tattoo ehlombe elingemuva yamaLadies
I-2. Imiqondo ethandekayo yaseHawaiian Tribal Tattoo imibono yabesifazane abasezintanyeni nasemahlombe
I-3. Emuva kwabesifazane - I-Tattoo ye-Triian Tattoo yase-Hawaiian
I-4. I-Big dotted Hawaiian Tribal Tattoo design ngemuva kweBesifazane
I-5. I-Black Hawaiian Tribal Tattoo design ebomvu ebuningi emlenzeni weLadies
I-6. I-Catchy emnyama kakhulu yaseHawaiian Emuva kwe-shoulder shoulder tattoo yamantombazane
I-7. I-Vibrant ithembise imibono yaseHawaiian Tribal Tattoo emlenzeni wabesifazane
I-8. Umbala omnyama obanzi obuningi baseHawaiian Tribal back shoulder tattoo imibono yabesifazane
I-9. I-hibiscus encane nenhle nenyoka yaseHawaii Tribal Tattoo yamaLadies ehlombe elingemuva
I-10. Ukuthobisa imibono emnyama yaseHawaiian Tribal Tattoo emhlane nangentanyeni yabesifazane
I-11. Imidwebo eminingi emnyama e-Hawaiian Tribal Tattoo emhlane emuva kwabesifazane
I-12. Tattoo Beautiful Tribal Tattoo nge hibiscus design ngemuva Back for Women
I-13. Amazing Amazing Tattoo Tribal Tattoo design on shoulder for Girls
I-14. Imibono yeTawaiian Tribal Tattoo emangalisa nge-belly side yamaLadies
I-15. I-orchid ebheka ama-orchid ama-Hawaiian Tribal Tattoo imibono ngemuva kweBesifazane
I-16. Ukubonisa Tattoo yaseHawaiian Tribal emuva emuva kwabesifazane nabesifazane
I-17. Ukuthakazelisa okulula kweThawaiian Tribal Tattoo nge-orchid ehlombe lamantombazane
I-18. I-stingray ne-turtle enkulukazi yaseHawaiian Tribal Tattoo emhlane emuva kwabesifazane
I-19. On Women- Inqwaba Tattoo Black Hawaiian Tribal Tattoo on emuva nangentamo
I-20. Ukuthayipha umbala obanzi obunzima obunamathebuli we-Hawaiian Tribal Tattoo owenzayo entanyeni
I-21. I-orchid yokuhlobisa i-Hawaiian Tribal tattoo iklanyelwe emaceleni ama-Ladies
I-22. Ukuthakazelisa okukhulu kwe-Hawaiian tribal back tattoo kwakha abesifazane nabamantombazane
I-23. Ukuthola umbala omnyama wombala waseHawaii wendabuko kanye nemibono yezintambo ezihlangothini lwabasifazane besisu
I-24. I-Cool Hawaiian tribal tattoo design on shoulder shoulder for women
I-Tattoo Tribal Tattoo
Ama-tattoos aseHawaii ngenye yezindlela ezithandwayo zohlobo lwezinkomba zenkathi yanamuhla. Ama-Tattoos aseHawaii abonisa isiko elicebile kanye namagugu eziQhingi zaseHawaiian ngokusebenzisa izimpawu ezihlukahlukene namaphethini. Bobabili abesilisa nabesifazane bagqoka lezi tatto njengenhlangano kulezi zinhlobo ezijulile. Ngokuvamile amadoda ayeqopha umzimba wawo wonke kusukela ekhanda kuya enzwaneni. Nakuba abesifazane bengatholanga umzimba wonke, babenombono omuhle wokubhala izithombe. Wonke ama-tattoos ayewuphawu futhi abe nencazelo ejulile. Ngokujwayelekile lezi tatto zenziwa kuphela embala omnyama.
Iyinki lasendulo yayihlanganisa inhlanganisela yomlotha kanye ne-soot futhi isetshenziselwa ukusikeka okujulile okwenziwe emzimbeni womuntu futhi yavunyelwa ukuba yomile ukuze izinhlayiya zibe mnyama. Kamuva u-inki wenziwa ngengxube yamantongomane asekukuyi kanye nomusi we-ushukela. Ama-Tattoos avame ukufaka ukuhlanganiswa okuyingqayizivele yemiklamo yezizwe ngezithombe eziphawulekayo zenyama yezilwane zomoya, izimbali ezishisayo noma ama-Tiki Gods aseHawaii. AbaHawaii babhekisela ekutheni ubuciko bokubhala imibala njenge 'kakau' nokudweba imibala ezinsukwini zakudala kwakuwuphawu lobuqili babo njengoba bebhekana nenqubo ebuhlungu kakhulu.
Izitayela zendabuko ezisetshenziselwa amaphethini weJomethri kanye nemiklamo yomugqa wokungena wokulinganisa emineni emnyama ukukhomba ukuzinikela kwezenkolo, imikhuba yokuhamba, isibindi empi, isimo, amanani kanye namagugu. Kodwa-ke, izithombe zanamuhla zamaHawaii ziveza ukuxuba kwemibala futhi zithintana kakhulu ngenxa yethonya lenkambiso yasentshonalanga. Lezi tatto zendabuko zazingenwa ngezinhloso ezihlukahlukene ezifana nokuzikhomba komuntu siqu, ukuvikelwa, ukukhumbula abathandekayo, ukuhlobisa, ingokomoya, ifa lomndeni kanye nesimo sempi. Yonke imiklamo iyingqayizivele futhi isizathu sokuthi ubani okhetha tattoo othize ubalulekile kakhulu.
Kodwa-ke, kunezinto ezimbalwa zezithombe zeHawaii ezivame ukusetshenziswa, njenge:
I-Gecko: Enye ye-design ethandwa kakhulu futhi eyintandokazi ku-tattoo yaseHawaiian yiGecko njengoba kukholelwa ukuthi kunegunya elingaphezu kwamandla. Ukuhlanganiswa kwemiklamo yamaHawaii yama-gecko kwenza kube mnandi kakhulu futhi kukhangele.
AmaSharki: lesi sidalwa esinamandla sibhekwa njengingcwele ngabadala futhi sibonisa ukuvikelwa komuntu ogqokile.
I-Tiki: Uthi u-Tiki ukholelwa ukuthi ungumuntu wokuqala, ukhokho wenganekwane yabantu. I-Tiki iyakwazi ukuhogela ingozi ngenxa yomqondo wayo wokunuka.
Ama-Shells: Ezikhathini zasendulo, amagobolondo asetshenziswa njengendlela yemali futhi ngenxa yalokho i-inked njengoba ifana nokuchuma kanye nengcebo.
I-Turtle Sea: I-sea turtle iwuphawu lokuphila okude nokuzala.
Izimbali zaseTropical: I-Orchids, i-humansrium ne-hibiscus ngokuvamile isetshenziswa kuma-tattoos aseHawaii. I-Orchid imelela uthando, ubuhle, ukunethezeka, nobuhle. I-humanrium iyimbali ebomvu ebonisa ukufuduka, umusa, nobungane. I-Hibiscus, umdwebo ovelele kakhulu wembali yaseHawaiian ihlotshaniswa nehlobo futhi kumnandi.
Okunye okukhethwa ngokujwayelekile abadansa be-Hula, i-Leis ne-Volcano.
Imidwebo ye-tattoo yaseHawaii inkulu futhi ibanzi uma kuqhathaniswa namanye ama-tattoos asePolynesia, okwenza ngokungangabazeki ubuciko. Thola eyodwa, uma uthanda ngempela imiklamo yaseHawaii. Khetha okukumelela kakhulu futhi uyayithanda impilo yakho yonke.
Tags:ama-hawaiian tattoos ama-Tattoos amantombazane izithombe zezinhlanga
Tattoos Imibono yobuciko Ithimba
Ngilungu le-Ritu nethimba le-https://tattoosartideas.com.
amathrekhi we-butterflyangel tattoosukudubula izithombei-octopus tattooizithombe zezingonyamaama-Tattoos amantombazanei-scorpion tattooamathumbu esifubaimibhangqwana emibhangqwanatattoo engapheliimibono ye-tattooumdwebo wezindlovuama-tattoo kubantui-henna tattooi-cherry ehlobisa i-tattooTattoos yama-Anklebird tattoosdesign mehndiidayimani tattootattoos zomqhelerose tattoosumdwebo womcibisholoimisindo yezintamboflower tattoostattoos cutengesandla izidakamizwaizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyeziizithombe zezinyangaI-Heart Tattoosama-cat tattoosumdwebo we-watercolortattoo isoabangani bomngane abangcono kakhuluumculo womdweboTattoos zeJomethrikhiuthando izithombeizithombe zezinhlangaimidwebo yamasleetattoos udadei-compass tattooukubuyisa izithombeizinyawo zamathambolotus flower tattooama-tattooama-sun tattoosama-tattoos engalotattoos eaglekoi fish tattooI-Feather Tattooama-tattoo amahange